သရုပ်ဆောင် လူမင်းနှင့် နေတိုးတို့ အဓိကပါဝင် ထားသည့် 'အောင်စေပိုင်စေ'ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိ?? - Yangon Media Group
သရုပ်ဆောင် လူမင်းနှင့် နေတိုးတို့ အဓိကပါဝင် ထားသည့် ‘အောင်စေပိုင်စေ’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိ??
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၃ဝ- သရုပ် ဆောင်လူမင်းနှင့်နေတိုးတို့ အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့်”အောင် စေပိုင်စေ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ကို အောက်တိုဘာ ၆ ရက်မှ စတင် ရုံတင်ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဇာတ်ကားကို အောင် တိုင်းကျော်ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုထုတ် လုပ်ရေးကစီစဉ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ကျော်ဇော်လင်း(အတွေးပုံရိပ်)ရိုက် ကူးပုံဖော်တင်ဆက်ထားကြောင်း၊ ဇာတ်လမ်း မောင်သူရ၊ ဇာတ်ညွှန်း ကိုကျော်တို့မှရေးသားထားပြီး သရုပ်ဆောင်များအနေဖြင့် လူမင်း၊ နေတိုး၊ မင်းရာဇာ၊ ညီထွဋ်ခေါင်၊ ခိုင်သင်းကြည်၊ အိချောပို၊ ယွန်း ရွှေရည်၊5Star လူရွှင်တော်အဖွဲ့ နှင့်ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်များအ ဖြစ် စိုးနန္ဒာကျော်၊ ဟိန်းမင်းတို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထား ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းဇာတ်ကားမှာ မြန်မာ နိုင်ငံအား နယ်ချဲ့များ အုပ်စိုးနေ စဉ် ခေတ်ကာလက မြို့ရွာများတွင် တောကြောင်(ဓားပြ၊ သူပုန်)ကြီး စိုးခြင်းကိုအခြေခံကာ ဟာသနှင့် အက်ရှင်ကိုပါတစ်ပါတည်းတွဲလျက် ခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နေတိုး ကို ပိုင်စေအဖြစ်မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ် ပြီး လူမင်းကို အောင်စေအဖြစ်ဖြင့် မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
သရုပ်ဆောင်နေတိုးက” ကျွန် တော်တို့ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ အောင် ပန်းမှာသွားရောက်ရိုက်ကူးထား တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေး ရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုတွေက ကိုယ် တွေကို ဟီးရိုးတွေလို့ထင်နေတဲ့ သူတွေက သူတို့ထင်သလို ဟီးရိုး တစ်ယောက်မဖြစ်တော့တဲ့အချိန် မှာဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ ဆွဲဆောင် မှုလေးတွေလည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ နောက်ကျွန်တော်တို့မှာ လည်း ဒီလိုဟာသနဲ့အက်ရှင်ပေါင်း ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားက လည်းနည်းနည်းရှားပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
သရုပ်ဆောင်နေတိုးက ဆက် လက်ပြီး ယင်းဇာတ်ကားတွင် ပရိ သတ်အတွက် မြှုပ်ကွက်များပါဝင် ကြောင်း ဇာတ်ကားတစ်ကားတွင် ယင်းသို့မြှုပ်ကွက်များပါဝင်မှု ကြောင့် ဇာတ်ကားမှာဆွဲဆောင်မှု ရှိနိုင်သည်ဟု ၄င်းအနေဖြင့် ထင် မြင်မိသည်ဟု ဆိုသည်။
ဒါရိုက်တာကျော်ဇောလင်း (အတွေးပုံရိပ်)မှ ”ဒီရုပ်ရှင်အထူး ပွဲမှာ ပရိသတ်တွေဇာတ်ကားကို ကြည့်ပြီးအားပေးတာတွေ့ရတော့ ကျွန်တော်အရမ်းကိုဝမ်းသာပါ တယ်။ ဇာတ်ကားတွေကို ပရိသတ် တွေကြည့်ကောင်းအောင် ကျွန် တော်တို့တွေနဲ့သရုပ်ဆောင်တွေ က အပင်ပန်းခံပြီးရိုက်ကြတယ်။တစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စားဝတ်နေရေးတွေကို ဖြေရှင်းရာ ရောက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီ’အောင်စေ ပိုင်စေ’ဇာတ်ကားကို ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရိုက်ကူး ထားပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအား ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်”ဟုပြော သည်။
အဆိုပါဇာတ်ကားကြီး Press show ကို စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက် ၇ နာရီက သမ္မတရုပ်ရှင် ရုံတွင်ပြသခဲ့သည်။
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ အခမဲ့ဆေးခန်း နောက် ခြောက်လခန့်တွင် ပိတ်သိမ်းရဖွယ်ရှိ
နျူကလီးယားစောင့်ကြည့်အဖွဲ့အတွက် နိုဘယ်ဆုကို ဟီရိုရှီးမားမြို့တွင် နျူကလီးယားဗုံးကြဲစဉ် ??